LCCI | LCCI 2017
by HSH | Sep 26, 2017 | Accountancy, LCCI, LCCI 2017, LCCI EXAM, LCCI Exam 2017, LCCI Myanmar, LCCI North Dagon, LCCI Online Learning, LCCI Yangon, Online Learning Myanmar
October မှာခွင့်ယူတော့မလား ?? အထူးသဖြင့် November မှာ LCCI Level3ဖြေဆိုမယ့်ရုံးသမားတွေ အရင်ကစာကိုဟုတ်တိပတ်တိမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ မိမိဘာသာသတိထားမိမယ်ဆိုရင် October တစ်လတော့ခွင့်ယူပြီး စာမေးပွဲနဲနဲလှမ်းတဲ့အချိန်မှာ တစ်လလောက်ခွင့်ယူပြီးကြိုးစားအားထုတ်လိုက်ပါ။...
by HSH | Sep 20, 2017 | Accountancy, LCCI, LCCI 2017, LCCI EXAM, LCCI Exam 2017, LCCI Exam Registration, LCCI Mandalay, LCCI Myanmar, LCCI NEWS, LCCI North Dagon, LCCI Online Learning, LCCI Yangon, Online Learning Myanmar
https://www.lccihomesweethome.com/wp-content/uploads/2017/09/HSH-L2-Online-Learning-Accomplishment-Ads.mp4 📔 Starting Date ကိုမိမိကိုယ်တိုင်သတ်မှတ်လိုက်ပါ HSH ONLINE LEARNING Website တွင် LCCI Level2Bookkeeping & Accounting အတွက် Online Learning Syllabus...
April Exam Results Available
by HSH | Jun 17, 2017 | Accountancy, LCCI, LCCI 2017, LCCI EXAM, LCCI Exam 2017, LCCI Exam Results, LCCI Myanmar, LCCI NEWS, LCCI Yangon
April Exam Results Available Exam Results for April 2017 are available now. Candidates are required candidate slip at the time of examination and ID cards to collect their...
LCCI Sample Answer Booklet
by HSH | Jun 3, 2017 | Accountancy, Exam Defer, LCCI, LCCI 2017, LCCI Candidate Slip, LCCI EXAM, LCCI Myanmar, LCCI NEWS, LCCI Result Slips & Certificates, LCCI Yangon
LCCI Exam ဖြေဆိုမည့်သူများအတွက် LCCI Exam ဖြေဆိုမည့်သူများသည် မဖြစ်မနေယူဆောင်သွားရမည့်ပစ္စည်းအားလုံးကို တစ်ရက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်စုစည်းထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ မဖြေခင်တစ်ညတည်းကကြိုတင်စုစည်းပြီးအိတ်ဖြင့်ထည့်ထားရန်နှင့် မြင်သာထင်သာသောနေရာတွင်ထားရန် ခုံနံပါတ်စာရွက် ( Timetable Slip...